Digniin ka dhan ah Dabeylo ku soo fool leh Xeebaha bari ee Somalia oo la shaaciyay – SBC
Digniin ka dhan ah Dabeylo ku soo fool leh Xeebaha bari ee Somalia oo la shaaciyay
Wasiirka Kaluumeysiga Puntland Eng Maxamed Faarax ayaa sheegay isagoo wareysi siinayay SBC in gobolada dhaca xeebaha bari ee Puntland ku soo wajahan yihiin Dabeylo waaweyn oo roobab sita sida ay sheegeen Hay’adaha ka shaqeeya Saadaasha Hawada.
Waxa uu sheegay Wasiirku in ay dhici doonaan dabeylo saacadii xawaare badan jaraya ayna ugaga digayaan dadka ku dhaqan deegaanada xeebaha dabeylahaasi la sheegay iskana taxadaraan.
“Waxaa la leeyahay dabeylahaasu waxay ku began yihiin deegaanada Xeebaha bari gaar ahaan aaga Eyl, waxaana leeyahay wararka cadowga lama beensado Laakiin ka hortag hala muujiro” ayaa ka mid ahaa hadalada Wasiirka Kaluumeysiga Puntland.
Dad ku dhaqan Deegaanada dhaca xeebaha ee Bariga Puntland waxay soo sheegayaan in ay durbadiiba bilowdeen roobab sita dabeylo iyo daruur culus, siweyna loogaga dareemayo deegaano ay ka mid tahay xarunta gobolka Bari ee Boosaaso.
Dibniintan ayaa sidoo kale waxaa maanta ku dhawaaqay xubnaha golaha wasiirada Dowlada federaalka Soomaaliya iyagoo sheegay in ay haboontahay in laga digtoonaado.
Waxii warar ee ku soo kordha dabeylahaasi la soo sheegayo kala soco wararka dambe ee SBC Online